Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » New Texas Chicken Joint Mahatonga azy ho lehibe any Kambodza
Texas Chicken, iray amin'ireo rojo akoho fisakafoanana haingana indrindra manerantany, dia manohy mitondra ny tsirony Texas sahy mankany Kambodza ary vao haingana no nanokatra ny toerana vaovao. Ny trano fisakafoanana ao amin'ny Monivong Blvd., Sangkat Srah Chok, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kambodza, dia nisokatra ho an'ny daholobe ny alatsinainy 4 oktobra 2021. Tompon'ny Texas Chicken franchisee TH F&B Co. Ltd. ny toerana misy azy.
"Faly izahay hanohy hampitombo ny fisianay any amin'ny faritr'i Azia-Pasifika, mitondra ny tsironay Texas sahisahy ho an'ny mponina sy ny mpitsidika," hoy i Russ Sumrall, filoha lefitra zokiolona, ​​fampandrosoana stratejika iraisam-pirenena ho an'ny franchisor ny marika Texas ChickenTM. “Manohy mampiseho ny fitiavany sy ny tsy fivadihany amin'ny marikanay ireo mpankafy anay, ary faly izahay mitondra ny akoho vita amin'ny tanana vita amin'ny tanana sy mofo roa, biscuit vita amin'ny tantely vao avy nendasina, ary lafy vita an-trano ho any amin'ny vondrom-piarahamonina maro kokoa manerana izao tontolo izao. Ny fahalalana sy ny traikefan'ny F&B eo amin'ny tsena sy ao anatin'ny indostrian'ny serivisy sakafo dia tena sarobidy ary hanampy amin'ny fampaherezana antsika any Kambodza. "
Ny fifanarahana francais manokana miaraka amin'ny TH F&B Co. Ltd, nambara tamin'ny taon-dasa, dia mbola nahomby rehefa nampiana toerana vaovao Texas Chicken. Ny fifanarahana dia mampiasa ny fotodrafitrasa sy ny fahaiza-manaon'ny TH F&B efa misy amin'ny fitantanana ireo marika F&B 10 manerantany any Kambodza.
Texas Chicken amin'izao fotoana izao dia manana toerana dimy ao Kambodza izay hita manerana an'i Phnom Penh miaraka amin'ny maro hafa nomanina satria ny Texas Chicken dia manohy mitondra ny tsiron'ny angano Texas any Kambodza sy izao tontolo izao.